Chigadzirwa Center Vagadziri | China Chigadzirwa Center Fekitori & Vatengesi
Ichi chirongwa chePCB gungano reGPS yekushandisa sisitimu inoshandiswa motocycle. Iyo indasitiri yemotokari ine zvinodzvinyirira zvakanyanya maererano nemashandiro nemaitiro, mhando uye nenguva yekuendesa. Zvese izvo zviri zvekutanga uye pamoyo pemitemo yeAsteelflash yekushanda, pasirese. Sekambani yemagetsi uye yemotokari PCBA inogadzira, isu, kuPandawill, tinounza masevhisi emhando yepamusoro muinjiniya, dhizaini uye prototyping.
Pcb gungano reMotokari Yekuongorora chishandiso
Ichi chirongwa chePCB gungano remotokari yekuongorora chishandiso. Iyo indasitiri yemotokari ine zvinodzvinyirira zvakanyanya maererano nemashandiro nemaitiro, mhando uye nenguva yekuendesa. Zvese izvo zviri zvekutanga uye pamoyo pemitemo yeAsteelflash yekushanda, pasirese. Sekambani yemagetsi uye yemotokari PCBA inogadzira, isu, kuPandawill, tinounza masevhisi emhando yepamusoro muinjiniya, dhizaini uye prototyping.
Kunze kwemitambo kamera
Ichi chirongwa chePCB gungano rekunze kwemitambo kamera chigadzirwa. Zvemagetsi zvemutengi, kubva kune zvigadzirwa zveruzha kusvika kupfeka, kutamba kana kunyatsoita chokwadi, zvese zviri kuwedzera kubatana. Nyika yedhijitari yatinorarama inoda nhanho yepamusoro yekubatanidza uye epamberi emagetsi uye kugona, kunyangwe kune yakapusa zvigadzirwa, kupa vashandisi pasi rese.
Chaiyo-nguva telemetry yevashandi
Ichi chirongwa chePCB gungano reReal-nguva telemetry inoshandiswa kune vashandi. Zvemagetsi zvemutengi, kubva kune zvigadzirwa zveruzha kusvika kupfeka, kutamba kana kunyatsoita chokwadi, zvese zviri kuwedzera kubatana. Nyika yedhijitari yatinorarama inoda nhanho yepamusoro yekubatanidza uye epamberi emagetsi uye kugona, kunyangwe kune yakapusa zvigadzirwa, kupa vashandisi pasi rese.
Ichi chirongwa chePCB gungano remusuwo chiteshi system. Isu, paPandawill, tiri nyanzvi mumasevhisi akachenjera ekugadzira dzimba. Kutenda kumafekitori edu akangwara, mainjiniya edu nemuchina vanoshandisa hukuru hwekuwongorora dhata, komputa yegore, njere dzekunyepedzera (AI) uye 3D-kudhinda kugadzira zvishandiso zvakabatana zveimba yakangwara.
Kubva pane dhizaini uye pcb bhodhi kugadzira kuNPI masevhisi uye magumo-kusvika-kumagumo chigadzirwa lifecycle mhinduro, edu mafekitori akangwara anogona kuunza smart cheni yekupa mhinduro kune vatengi vedu, kune ese avo akangwara epamba zvishandiso.
Akatungamirira ratidza kudzora maitiro
Ichi chirongwa chePBB yegungano yeiyo LED kuratidza inodzora system. Isu, paPandawill, tiri nyanzvi mumasevhisi akachenjera ekugadzira dzimba. Kutenda kumafekitori edu akangwara, mainjiniya edu nemuchina vanoshandisa hukuru hwekuwongorora dhata, komputa yegore, njere dzekunyepedzera (AI) uye 3D-kudhinda kugadzira zvishandiso zvakabatana zveimba yakangwara.
Signal kugadzirisa kutonga bhodhi
Ichi chirongwa chePCB gungano rekuratidzira chiratidzo chebhodhi. Iyo indasitiri indasitiri yanga iri nhoroondo chimwe chikamu chikuru chakashandiswa naPandawill asi isu tave kupupura Internet yezvinhu, takatarisana neindasitiri yeInternet yezvinhu (IIoT), iyo ichaunza kubatana uye otomatiki kumafekitori nemakambani akatenderedza nyika.
IoT dhata yekubvisa dhata
Ichi chirongwa chePCB gungano reIoT dhata yekuwana dhata. Kubva kuinjiniya uye ekugadzira masevhisi kune akangwara akadhindwa wedunhu bhodhi musangano, isu, kuPandawill EMS kambani, tinounza nyanzvi mhinduro kuInternet yezvinhu zvishandiso.
Laser yekuporesa mudziyo
Ichi chirongwa chePCB gungano remuchina wekuporesa laser. Chitsiko cheIO 13485 chakatsigira kutsigira zvaunoda mukugadzira mune imwe yeindasitiri yakaoma kwazvo: kugona kwedu kwekurapa kunovhara zvikamu zvakasiyana zvezvikamu kubva pakuongorora michina kuenda kumidziyo inochengetwa nemaoko, kubva kudhinda wedunhu mabhodhi egungano (PCBA) kusvika kumagumo zvigadzirwa zvigadzirwa.
Ultrasound bhodhi gerd yekurapa bhodhi